होटेल ट्यून होटल बुकिंग, होटल, टुलालमा होटलहरू
BESTES PRULS TULLES PROLLES DULLESS
आराम र संज्ञानात्मक पर्यटनको लागि
छुटहरू र विशेष प्रस्तावहरू
साइटमा प्रस्तुत गरिएको सबै जानकारीहरू प्रत्यक्ष मूल्य सहित निरन्तर अद्यावधिक र अपडेट गरिएको छ। यदि तपाईं धेरै प्रयास बिना कोठा बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले भर्खर हाम्रो बुकिंग विभागलाई कल गर्नु पर्छ। तपाईंलाई केवल सम्पर्क विवरणहरू चाहिन्छ। बुकिंग सेवाहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्।
आवास सुविधा एक व्यापार भ्रमणको साथ यहाँ आउनेहरूको लागि महान छ। यदि तपाईं केन्द्रमा बस्न चाहनुहुन्छ भने र व्यवसाय केन्द्रहरू, क्याफे र पसलहरूको लागि धेरै समय खर्च गर्नुहुन्न, तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यी होटलहरू मध्य जिल्लामा अवस्थित छन् र उच्च अतिथि रेटिंग्स द्वारा चिह्नित छन्।
रसियाको बहुमूल्य राजधानी वा Gingerrebrads को जन्मस्थल ट्यूला शहर को दुई लोकप्रिय लोकप्रिय नामहरु हुन्। प्राय: यो शहरलाई संज्ञानात्मक र भ्रमण पर्यटनको उद्देश्यको लागि भ्रमण गरिन्छ। Tulu gingrebrade को प्रख्यात संग्रहालयको छेउमा निम्न होटलहरू हुन्: र। मस्को रेलवे स्टेशनबाट टाढा बस्न चाहन्छन्? त्यसोभए यी होटलहरू हेर्नुहोस् र होस्टलहरू टुला:,।
मा मूल्य दायरा
पुस्तक धेरै किफायती मूल्यहरूमा ट्यूटको कोठा। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं होस्टलमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं प्रति व्यक्ति 350--500 रूबलको क्षेत्रमा एउटा ओछ्यान-स्थान रोज्न सक्नुहुन्छ। TULA को लोकप्रिय छस्टलहरू मानिन्छ: ,. शहरमा बजेट होटलहरू: र।
प्राय: होटेल ट्यूटका मालिकहरूमा प्राय: होटेल ट्यूटरको मालिक र विशेष प्रस्तावहरूको व्यवस्था गर्दछ। अपडेटहरूको लागि हेर्नुहोस् र तपाईं एक धेरै आकर्षक मूल्य मा एक कोठा बुक गर्न सक्नुहुन्छ। एक महत्वपूर्ण छुटको रूपमा एक महत्वपूर्ण छुटको रूपमा रमाईलो बोनस नेटवर्कमा हुन सक्छ होटेल र ताराहरूको साथ होटलहरू।
होटल समीक्षा ट्यूवले निवास स्थान छनौट गर्दा एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। पाहुनाहरूले निम्न होटेलको लागि विशेषताका साथ समीक्षा लेखेका छन्:, र।
होटल -4.R.RU - यो TULU (TULU क्षेत्र) मा होटलहरूको बारेमा जानकारीको पहुँच हो। विवरण सिक्नुहोस्, किनकि यो यसमा रहेको होटेलहरूले शहरको मध्य भागमा कसरी अवस्थित छन् भनेर विस्तृत जानकारी संकेत गर्दछ।
tula, हाम्रो साइट मा पुस्तक, tula। होटल, किनकि यो धेरै सरल छ। सबै ट्यूला होटेलहरू हामी एक ठाउँमा स collect ्कलन गर्छौं ताकि तपाईं न्यूनतम प्रयासको साथ बुक गर्दै।
मुख्य सडक tula -। यसमा (वा नजिकैको) त्यहाँ सबै उत्तम होस्टहरू, क्याफेहरू, पसलहरू छन्। लेनिनको साथ हिड्दै, तपाईं धेरै चाखलाग्दो स्मारकहरू देख्नुहुनेछ: Teula gingerbread मा एक स्मारक, लेफर्सहरु को एक स्मारक, साथै स्मारक "tulua take chaping"।
त्यहाँ हतियार संग्रहालय जस्ता पर्याप्त रमाईलो संग्रहालयहरू छन्, जुन टुन जहिले पनि प्रसिद्ध भएको छ, सदोभर्रोभरको संग्रहालय, सामरुभारोभको संग्रहालय हो। डेमोडोभी संग्रहालयको भ्रमण गर्न रोचक हुनेछ, जसमा रूढीवादीहरूको चिहान पनि सामेल छन्।
<< p> tul मा आइपुगे प्रसिद्ध कुलीकोभो क्षेत्रलाई बाइपास गर्न असम्भव छ जहाँ रूस मंगोलो-तास्रो जुवाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न असम्भव छ। मैदानको बीचमा एक स्मारक रिमाइन्डर चैपल हो। मार्ग, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण र युद्धहरू प्राय: जसो व्यवस्थित गरिन्छ।
<< pra> बेल नवभाको पार्कमा टैला, साथै सबै दिनको चिहानसम्म हिंड्नुहोस्, जुन प्रायः आधुनिक सुन्दर पार्क हो
तुला टुला क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र हो - रसियाको केन्द्रीय संघीय जिल्ला। अघिल्लो 123 किलोमिटर।